Emeela ka ọ bụrụ naanịOffice na Desktọpụ 6.2 ma ndị a bụ akụkọ ya | Site na Linux
Emeela ka ọ bụrụ naanịOffice na Desktọpụ 6.2 ma ndị a bụ akụkọ ya
N'oge na-adịbeghị anya a mara ọkwa nke ọhụrụ nke Naanịffice Desktọpụ 6.2 nke bu ihe edobere iji rụọ ọrụ na ederede ederede, akwụkwọ ntanetị na ihe ngosi.
NaanịOffice azọrọ na ha na-arụ ọrụ zuru oke na usoro MS Office na OpenDocument. Formatsdị akwadoro: DOC, DOCX, ODT, RTF, TXT, PDF, HTML, EPUB, XPS, DjVu, XLS, XLSX, ODS, CSV, PPT, PPTX, ODP. Enwere ike ịgbasa ọrụ nke ndị editọ site na plugins, dịka ọmụmaatụ enwere plugins dị iji mepụta ndebiri ma gbakwunye vidiyo YouTube.
NaanịOffice na Desktọpụ gụnyere ndị editọ ntanetị AKWYOKWỌ NDYO ONLYOFFICE 6.2 wepụtara na nso nso a ma na-enye ndị na-esonụ ozi ọma.
Otu n’ime ha bụ ike itinye akara aha dijitalụ na dọkụmentị, mpempe akwụkwọ, na ngosi maka nkwenye na-esochi nke iguzosi ike n'ezi ihe na enweghị mgbanwe ma e jiri ya tụnyere nke mbụ edepụtara. Iji tinye dijitalụ mbinye aka, a chọrọ akwụkwọ asambodo nyere site na asambodo ikike ịbanye na mbinye aka agbakwunye site na menu "Nchedo taabụ -> Mbinye aka -> Tinye mbinye aka dijitalụ".
Mgbanwe ọzọ nke ewepụtara bụ nkwado maka nchekwa paswọọdụ nke akwụkwọ, eji okwuntughe iji zoo ọdịnaya, yabụ ọ bụrụ na ọ furu efu, enweghị ike weghachite akwụkwọ ahụ. Paswọọdụ nwere ike ịtọ site na menu «Njikwa taabụ -> Chebe -> Tinye paswọọdụ».
N'aka nke ọzọ, anyị nwere ike ịchọta mwekota na Seafile, ihe ọmụma mmekọrịta, mmekota na ígwé ojii nchekwa ikpo okwu kwadoro site na teknụzụ Git. Mgbe DMS (Document Management Systems) dakọtara na Seafile rụọ ọrụ na Seafile, onye ọrụ ga-enwe ike idezi akwụkwọ echekwara na igwe ojii a site na OnlyOffice ma rụkọta ọrụ na ndị ọrụ ndị ọzọ. Iji jikọọ na Seafile, họrọ "Jikọọ na Cloud -> Seafile" na menu ahụ.
Ma mgbanwe ndị ọzọ emere na mbụ na ndị editọ n'ịntanetị:
Onye editọ akwụkwọ ahụ na-agbakwunye nkwado maka ịtinye tebụl nke ihe osise, nke yiri nke tebụl nke ọdịnaya nke akwụkwọ, mana depụtara ọnụ ọgụgụ, chaatị, usoro, na tebụl eji na akwụkwọ.
Ntọala maka nkwado data apụtawo na nhazi ihe ntanetị, na-enye gị ohere igbochi ụdị data abanye na cell enyere na tebụl, yana ịnye ikike ịbanye dabere na listi adaala.
Ihe nhazi ihe omuma na-eme ka ikike itinye mpempe akwụkwọ n'ime tebụl dị oke mkpa, na-enye gị ohere iji nlezianya nyochaa ọrụ nke nzacha iji ghọta ihe data na-egosipụta.
E nyere ikike ịkagbu mmezi tebụl akpaka. UMUAKA, AKW ,KWỌ, MGBE, ỌDLE, MUNIT, na RANDARRAY agbakwunyere atụmatụ. Agbakwunyere ikike ịkọwapụta usoro nọmba gị.
E tinyela bọtịnụ ka ọ dịkwuo ma ọ bụ belata font na nchịkọta akụkọ ngosi, yana ike ịhazi usoro akpaka nke data ka ị pịnyere.
Agbakwunyere ike iji Tab na Mgbanwe + Tab na igbe igbe dị iche iche.
1 Etu esi etinye 6.2 na Onlyoffice Desktop Editors na Linux?
1.1 Ntinye site na Snap
1.2 Ntinye site na iji ngwugwu DEB
1.3 Ntinye site na ngwugwu RPM
Etu esi etinye 6.2 na Onlyoffice Desktop Editors na Linux?
Maka ndị nwere mmasị ịnwale ụlọ ọrụ a ma ọ bụ melite ụdị ọ dị ugbu a na nke ọhụrụ a, Ha nwere ike ịme ya site na isoro usoro ndị anyị na-ekerịta n'okpuru.
Ntinye site na Snap
Simplezọ ọzọ dị mfe iji nwee ike ịnweta ngwa a na nkesa Linux ọ bụla bụ site na enyemaka nke nchịkọta Snap, yabụ Naanị ịkwesịrị ịnwe nkwado iji nwee ike ịwụnye ngwa nke ụdị a na sistemụ gị.
Na ọnụ, ị ga-pịnye iwu na-esote ka ị rụọ nrụnye:
Ntinye site na iji ngwugwu DEB
Ọ bụrụ na ha bụ ndị ọrụ Debian, Ubuntu ma ọ bụ nkesa ọ bụla na nkwado maka ngwugwu ụgwọ, ha nwere ike budata ngwungwu ngwa ahụ site na njedebe na iwu na-esonụ:
Mgbe nbudata, ị nwere ike iwunye na:
Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu na ịdabere na ya, ị nwere ike idozi ha site na ịme iwu ndị a na njedebe:
Ntinye site na ngwugwu RPM
N'ikpeazụ, maka ndị bụ ndị ọrụ RHEL, CentOS, Fedora, openSUSE ma ọ bụ nkesa ọ bụla na nkwado maka ngwugwu rpm, ha kwesịrị ịnweta ngwugwu ọhụrụ iwu:
Ozugbo emere nbudata ahụ, enwere ike ime nrụnye na iwu ndị a:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Emeela ka ọ bụrụ naanịOffice na Desktọpụ 6.2 ma ndị a bụ akụkọ ya
Nzọụkwụ: A mfe na ngwa ngwa ngwa ihichapụ faịlụ na Linux